'बारपाक घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस्' : बाबुराम भट्टराई&nbsp;
'बारपाक घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस्' : बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बारपाक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनले आज सामाजिक संजाल ट्वीटरमा ट्वीटमार्फत उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले लेखेमा छन् , 'ज्यादै दुःखद घटना ऐतिहासिक बारपाक, सुलीकोटको । घटनाको निष्पक्ष र तथ्यगत छानबिन होस् । सहर मात्र हैन गाउँघर कुनाकाप्चाका घटनाप्रति पनि उत्तिकै संवेदनशील बनौं । हार्दिक श्रद्धान्जली/समवेदना !'
बारापाक सुलिकोट गाउँपालिका–१ मा गए राति एउटै घरमा सुतेका एक पुरुष र दुई महिला आइतबार मृतावस्थामा भेटिएका थिए । मृतावस्थामा भेटिनेमा ८४ वर्षीय दिलबहादुर गुरुङ, उनकी बुहारी २२ वर्षीया आइतकुमारी गुरुङ र १३ वर्षीया नातिनी उषा गुरुङ रहेका छन् ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७७ १५:४८ सोमबार
चौरजहारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओली
चौरजहारी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न दलित पत्रकार संघको माग